Iiglofu zeGoli zeBoonic Zinceda abaGoli bafumane kakuhle
Iimodyuli zibandakanya ukugqithisa okongezelelweyo, ukutshisa umthunzi
Iiglavu zeGoli zeBoonic zenziwe yecandelo leNkampani yase-Hillerich neBradsby, inkampani efanayo eyakuzisa i-Louisville Slugger baseball bat kwaye yenza amaClubs e-PowerBilt igalofu.
Iiglafu zegalufu ezivela kwi-Bionic ziya kumzekelo amaninzi, amaninzi kumadoda kunye nabaninzi kubasetyhini, ikakhulukazi kwizicwangciso zombala omnyama / ezimhlophe kodwa kunye neendlela ezimbalwa ezikhethiweyo zabasetyhini.
Zixabisa ngaphezu kwezinye iiglafu zegalufu kwiimarike kodwa zinikela nge-padding eyongezelelweyo, isundu esincibilikileyo lesikhumba kunye nezinye iimpawu esiza kuxoxa ngazo ngaphantsi.
Imvelaphi yeGionic Golf Glove
Iiglavu zeGalofu kunye negama le-Bionic ekuqaleni lafika kumakethi ngasekupheleni kuka-2004, kwaye ziye zithengiswa kakhulu ngexesha labachaphazelekayo be-arthritis kunye nabanye abagadi begolfu abanomdla ngezandla zabo kunye nokukwazi ukubamba ngokufanelekileyo kwiiklabhu zabo zegalufu.
Siye sabhala ngeglave yaseGoliy yasekuqaleni kwangoko, ngokugxininisa "uphawu lwesigunyaziso" senkampani kwiArthritis Foundation. Nazi ezinye zezinto esizibhale ngelo xesha:
"I-Bionic Golf Glove yidalwa likaDkt. Jim Kleinert, udokotela ohlinzekwa ngamathambo ohloniphekileyo kakhulu.
"Izibonelelo zivela kwi-globally patomical designs yeiglavu eziquka iminwe ejikelezayo ngaphambili, indawo yokunyakaza, kunye neenqwelo zokunceda," kusho uDkt. Kleinert. "Iipasiti ziyimpawu ebalulekileyo kuba zizalise iigodini zeminwe ukuba zinike umnxibelelwano olungcono kwi-club."
I-Bionic Golf Glove yiyona igravu yokuqala yokufumana i-Arthritis Foundation ye-Ease-of-Use Commendation.
Imveliso elula ukuyisebenzisa inganciphisa uxinzelelo kumalungu, kwaye yenza imisebenzi yansuku zonke ilula kubo bonke abantu, "kusho uDkt. John H. Klippel, umongameli we-Arthritis Foundation kunye ne-CEO.
I-teknoloji kwiglafu yegalufu - iTeknoloji ye-Bionic, eyiyo negama elitsha ngaphakathi kwe-H & B - iqulunqwe kuqala kwiiglavu ze-hockey, yatshintshela kwiimitto zokufumana i-catcher kunye nee-mitts zokuqala ezisezantsi kwi-baseball, ize ihlasele iiglavu kwi-baseball. I-Gloon Gardening Glove iyasungulwa ngokubanzi kwaye iphinde ifumane i-Arthritis Foundation ye-Ease-of-Use-Praise Use. "
Iiglofu zeGoli zeBoonic namhlanje
I nkampani isenza iiglavu namhlanje ngokukhethekileyo ngabaxhamli be-arthritis, nangona idala idlulile ngaphaya kwelo gxininiso. Iiglavu ezenzelwe izifo ze-arthritis ziimodeli zeReliefGrip, ezinikezelwa ngamadoda nabasetyhini.
Iiglavu zeReliefGrip, i-Bionic Golf ithi, "uncedise ngakumbi kunye noxinzelelo oluncinci," oluye lunceda "ukunciphisa intlungu kunye nokungaxhamli kwiindawo ezinokubumba kunye nezibuhlungu, kukunika ingcono."
Zonke iimodeli zeGloon zeGlave zinezikhumba zesikhumba kunye ne-terrycloth "i-mini-twels" ngaphakathi ukuze kuncede ukulawula ukufuma. Isicatshulwa-ukupheliswa kweentendelezo ze-sweaty - ngenye yezinto eziphathekayo zeByonic ezithandwa kakhulu ngabathwali.
I-padding eyongezelelweyo malunga nommandla ongaphantsi kweesithupha kunye namalungu eminwe inceda ukudala intambo ekhululekile ngaphandle kokuba i-golfer ibambe iqinile .
Iimodeli zeGionic zeGrade eziqhelekileyo ziquka ezi:
I-PerformanceGrip: "Ngeendawo zokujikeleza" phakathi kweminwe nakwezinye indawo ukunyusa ukuguquguquka nokuziva; iquka i- ballmarker yamagnetic.
I-RelaxGrip: Ukukhuthaza ukukhululeka ngakumbi kunye ne-padding eyenzelwe ukuphuma ngaphandle kwesandla se-golfer.
StableGrip: Ngokucwangciswa komnwe we-tapered ukulingana nomnwe wendalo.
AquaGrip: Ukudlala kwindawo yezulu.
Zonke ezi ngaphandle kwe-AquaGrip ziza kumabinzana kunye neenguqulelo zamabhinqa. Nangona le mizekelo ingathengiswanga ngokuthe ngqo kwiimvumi ze-arthritis, nazo, zibonelela ngokukhawuleza kwimiba ephambili kwiminwe nakwezinye iindawo.
Ngolwazi olungakumbi, tyelela i-bionicgloves.com.
Iimpawu Ezilishumi malunga noPedro de Alvarado